News Collection: फोटोसपको होइन, रेजिनाको रिएल !
आयोजित प्रेसमिटमा धेरै पत्रकारले चलचित्र 'चिनो'मा रेजिना उप्रेतीले रिएल एक्सन गरेकी हुन् भनेर ठम्याउन सकेनन् । सिनेमाको प्रोमो र पोस्टर हेरिसकेपछि धेरैले रेजिनाको नक्कली एक्सन र फोटोसपको कमाल भनेर आशंका गरे ।
प्रेस मिट होस्ट गरिरहेका निर्देशक शोभित बस्नेतलाई पुष्टि गर्न चुनौति आइपर्‍यो र तत्कालै मन्चमा बसेकी रेजिनालाई फाङ र किक देखाउन आग्रह गरे । रेजिना अकमकिइन् । स्टेज अघिको चिसो भुइँमा ओर्लिएर उनले चलचित्रमा गरेजस्तो फाङ र किकका पोजहरु देखाउन थालिन् र पत्रकारले क्यामेरामा कैद गर्न थाले । अनि शोभितले भने- बल्ल देख्नुभो ?
पुस ३० मा रिलिज हुन लागेको रिमेक चलचित्र 'चिनो'बारे जानकारी दिन आयोजित प्रेसमिटमा भएको रमाइलो घटना हो यो । पत्रकारले नपत्याएपछि रेजिनालाई वास्तविकता देखाउनुपरेको थियो । यतिसम्मकी काजल म्याडमको वेशभुषा र भूमिकामा मन्चमा बसेका द्धन्द्धनिर्देशक राजेन्द्र खड्गी र निर्देशक बस्नेत पनि रेजिनाको स्टन्टपछि ढुक्क भएका थिए । रेजिनाले यो चलचित्रमा घोडाचढी र फ्रीफलका साहसिक स्टन्टहरु पनि दिएकी छिन् ।
जमघटमा धेरैले रेजिनाको एक्सनको खुलेर प्रशसा गरे । द्वन्द्वनिर्देशक खड्गीले त पहिलोपटक नेपाली चलचित्रमा हिरोइनले गरेको यो साहसिक एक्सन भएको टिप्पणी गर्न चुकेनन् । 'हिरोइन होइन हिरोहरुले गर्न नसक्ने एक्सन पनि रेजिनाले गरेकी छिन्' निर्देशक शोभित बस्नेत भन्दै थिए ।
चलचित्रमा काजल म्याडमको रुपमा द्वन्द्वनिर्देशक राजेन्द्र खड्गी तेस्रोलिङ्गी भएर खेलेका छन् । 'खेल्दा-खेल्दा आफैलाई गे जस्तो लाग्न थाल्यो' खड्गी भन्दै थिए । भुवन केसीकी पूर्वपत्नी सुस्मिता केसीको सुझावमा फिल्मको खलपात्रलाई तेस्रोलिङ्गी बनाइएको र सुरुमा यो भूमिका अशोक शर्मालाई दिइएकोमा ब्यवस्तताले राजेन्द्रले खेलिदिएको शोभितले बताए ।